मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सले ५०% हकप्रद बिक्री गर्न जेठ १७ गते बुक क्लोज गर्दै
ARCHIVE, MARKET WATCH » मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सले ५०% हकप्रद बिक्री गर्न जेठ १७ गते बुक क्लोज गर्दै
काठमाडौं - मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले ५०% हकप्रद सेयर बिक्री गर्न जेठ १७ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । यस आधारमा जेठ १६ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र मिर्मिरेको हकप्रद भर्न पाउनेछन् । मिर्मिरेले १ः०.५ अनुपातमा १ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको छ ।
यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले गर्दैछ । मिर्मिरे माइक्रोपाइनान्सको हाल चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ छ । तेस्रो त्रैमासमा यसले १ करोड २१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । माइक्रोफाइनान्सको प्रतिसेयर आम्दानी अनुपात (वार्षिक) ५४.१८% र प्रतिसेयर नेटवर्थ २०२ रुपैयाँ ८१ पैसा छ ।
अनुराधाको नागरिकता र वायोग्राफीमा जन्मस्थान फरक फरक, यस्तो छ प्रमाण
लोकसेवा आयोगले खुला तथा समावेशी तर्फ ४१६ जना नायब सुब्बा माग्यो, योग्यता: +२ वा सो सरह !
ग्लोबल आइएमइ बैंकमा जागिरको अवसर, यस्तो छ आवश्यक योग्यता ! (पूरा बिज्ञापनसहित)
अन्तत : हास्यकलाकार मनोज गजुरेलले गरे डिभोर्स, यस्तो छ सम्बन्धविच्छेदको कारण !